घर फर्काइदिन्छु भन्ने नेपालीनै पैसा लिएर भागेपछि अवैधानिक भएँ
Fri, Apr 27, 2018 | 06:26:58 NST
18:33 PM (1 year ago)
मेरो घर कैलालीको बौनिया । उमेरले काम गर्न योग्य भएपनि कुनै काम पाएको थिइन । काम पाएका साथीहरु काम गरिरहेका थिए । अनि नपाएकाहरु विदेश जाँदै थिए । त्यसैले मैले पनि विदेश जाने सोचें र काठमाडौंको म्यानपावरमा कागजपत्र बुझाएँ ।
म्यानपावरले मलाई फर्निचरको काममा मलेसिया उडायो । मलेसिया उड्दै गर्दा मैले विदेश पुग्न पाएँ त पैसा कमाउँथे भन्ने सोचें । तर मलेसिया पुगेपछि सोचे जस्तो भएन । काम त भनेकै पाएँ तर बिदा नै दिँदैनथ्यो । एक पटक त उठ्नै नसक्ने गरी बिरामी परें । तर पनि बिदा पाइन । यसरी नै दुःख गरेर डेढ वर्ष जति काम गरें । तर बिरामी हुँदा पनि बिदा नपाएपछि भने मलाई त्यहाँ काम गर्नै मन लागेन र अर्को काम खोज्न थालें ।
काम खोज्ने क्रममा चितवनका एक जना नेपाली भेटिए । मलाई उनले अर्को ठाउँमा काम गर्नुभन्दा नेपाल फर्क म फकाईदिन्छु भने । उनले घर फर्काइदिन पैसा मागे । मैले पनि घर फर्किन पाउने भएँ भनेर पैसा बुझाएँ । पैसा बुझाएपछि ती नेपाली बेपत्ता भए । घर फर्किन पाउने आशामा मैले कहाँ बस्ने ? के काम गर्ने ? भन्ने नसोधी उसलाई पैसा दिएँ तर त्यही निर्णयले अहिले पछुतो लागिरहेको छु । ठगिइसकेपछि मैले मलेसियामा रहेका भिनाजुलाई भेटें । केही समय भिनाजुसँगै बसें । तर मसँग कागजपत्र केही छैन । त्यसैले अहिले अवैधानिक भएको छु ।
अवैधानिक भएर अहिले सेक्युरिटी गार्डको काम गर्दैछु । काम गरिरहे पनि अवैधानिक भएकाले समस्याहरु धेरै छन् । न नेपाल फर्किन पाएँ न त वैधानिक रुपमा काम गर्न नै पाएको छु । त्यसैले समस्यामा छु ।